တရုတ်ပန်းချီစက်ရုပ် HY1050A-200 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
ငါတို့သည်ဆေးသုတ်ဆေးများကိုအလိုအလျောက်ဆေးမှုတ်။ ဆေးသုတ်နိုင်သည်။ စနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီးသည်နှင့်စက်မှုပန်းချီစက်ရုပ်သည်ပစ္စည်းများကိုအသုံးချနိုင်သည်။ စက္ကူစက်ရုံများသည်ခြွင်းချက်ထားရန်လွယ်ကူစေသည်။ စက်ရုပ်၏လက်မောင်းများသည်ပါးလွှာပြီးအကွာအဝေးသို့ရောက်ရုံသာမကစက်ရုပ်များကိုနေရာအမျိုးမျိုး (နံရံ၊ စင်၊ ရထား၊ ရထား) တွင်ပိုမိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ပန်းချီစက်ရုပ်များကိုကားထုတ်လုပ်ခြင်းဌာနများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာကားများ၊ တူရိယာများ၊ စက်ရုပ်ဆိုင်ရာဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအားသာချက်များကိုပေးသည်။
အန္တရာယ်ကင်းသောပန်းချီလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၁.၁ လုံခြုံစိတ်ချရမှု
Q1 ။ ဘယ်မော်ဒယ်ပန်းချီကားအတွက်အသုံးပြုနိုင်သလဲ
ဖြေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ရိုး ၆ ခုနှင့် ၀ င်ရိုး ၄ စက်အားပန်းချီအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ HY1020A-168, HY1010A-143 စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Q2 ။ နာမည်ကြီးတံဆိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် YOO HEART စက်ရုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ရသနည်း။
A. ပထမ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းချီစက်ရုပ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်စေရန်အသုံးပြုသည်။ စက်ရုပ်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်ရုံများကိုစက်ရုပ်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပန်းချီနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တကယ် application များစွာရှိပြီးဖောက်သည်များထံမှကောင်းသောအကဲဖြတ်မှုများရရှိသည်။ ဤကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကပန်းချီအတွက်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Q3 ။ လေ့ကျင့်မှုကော။
A. လေ့ကျင့်ရန်အတွက်သင်သည်နက်ရှိုင်းသောလေ့ကျင့်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့စက်ရုံတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ငါတို့လိုအပ်တဲ့လူကိုလိုအပ်ရင်နင့်ငွေအားလုံးပေးရမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့အထောက်အပံ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါမှသင်စက်ရုပ်၏အခြေခံအသုံးပြုမှုအချို့ကိုသိရှိနိုင်မှာပါ။
Q4 ။ ငါပန်းချီကားကိုသာသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်နိုင်သလား?
A. အကယ်၍ မင်းကပန်းချီဆွဲစက်ရုပ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ချင်ရင်ငါတို့အကြောင်းပြောနိုင်တယ်။
Q5 ။ အကယ်၍ ပန်းချီဆွဲခြင်းဆိုင်ရာလျှောက်လွှာရှိပါကမည်သို့စတင်ရမည်နည်း။
A. သင်လိုအပ်တာကိုအရင်ပြောနိုင်ပါပြီ။ ၎င်းသည်ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းအတွက်အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားစက်ရုပ် + ပန်းချီကား + ပန်းချီဆွဲခြင်းအားသာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ သင်၏နည်းပညာအကြံဥာဏ်ကိုသင်၏နည်းပညာရှင်ကပေးလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ palletizing စက်ရုပ် HY1010A-143
နောက်တစ်ခု: ပန်းချီစက်ရုပ် HY1010A-143